မိတ်ဆက်ချင်လို့ပါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မိတ်ဆက်ချင်လို့ပါ
Posted by manawphyulay on May 15, 2011 in Creative Writing, My Dear Diary | 14 comments
ယဉ်ကျေးမှုအစစ်အမှန်ဟာ လူ့အနှစ် အမြုတေရတနာဖြစ်ပါတယ်။ ပထ၀ီအနေအထား၊ လူနေမှု စနစ်၊ ဓလေ့ထုံးစံ ဆင်ယင်ထုံးဖွဲ့မှု၊ ပန်းချီ၊ ပန်းပု၊ ဘာသာအယူဝါဒ၊ အဆိုအတီးအက၊ စာအရေးအသား၊ အတွေးအခေါ် စသည့်တို့ကိုမှီ၍ ယဉ်ကျေးမှု သဘောတရားများ ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဆိုရင်ပေါ့လေ။ ကိုယ့်နိုင်ငံကိုယ်ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ထည်ထည်ဝါ၀ါ ရပ်တည်နေနိုင်တဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းသော အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး သာသနာစည်ပင်ပြန့်ပွားနေတဲ့ နိုင်ငံ လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ စင်စစ်အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုဆိုတဲ့နေရာမှာ အမျိုးသားစိတ်၊ အမျိုးသား သဘောတရား ကိန်းဝပ်နေသော ယဉ်ကျေးမှု ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုအခါမှာ နိုင်ငံခြား ယဉ်ကျေးမှုများ ပျံ့နှံ့လာမှုကြောင့် မြန်မာအမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုအတွက် အန္တရာယ်ရှိလာတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ ကျွန်မ​ စဉ်းစားမိတာပေါ့လေ။ အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုသာ တကယ်လို့ နိမ့်ကျသွားခဲ့ရင် နိုင်ငံနှင့် လူမျိုးလည်း နိမ့်ကျသွားတော့မှာပဲပေါ့။ ဒီလိုတော့ မဖြစ်သင့်တာအမှန်ပါဘဲ။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုကို ခိုင်ခိုင်မာမာ ထိန်းသိမ်းဖို့အတွက် လူတိုင်းမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ တာဝန်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်း ပြောမှသိမှာထက် ကိုယ့်ရဲ့ အသိစိတ်ဓာတ်နဲ့ ကိုယ် သိဖို့ အရမ်းလိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူတိုင်းလူတိုင်း ကျွန်မနဲ့အတူ ယဉ်ကျေးမှုကြီးကို ထိန်းသိမ်းကြပါစို့လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
ယဉ်ကျေးမှုကြီးကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရမယ့်အရေးကြီးတဲ့ အချက်ကြီး သုံးခုရှိပါတယ်။ ဒါတွေဟာ ဘာတွေလဲ။ ကြည့်ကြရအောင်နော်။ လိုနေရင်လည်း အမြင်ကို ပြောလို့ရပါတယ်။ ကျွန်မ သိသလောက်ကို ပြောရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
“ကိုယ့်အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုကို ခိုင်ခိုင်မာမာ ထိန်းသိမ်းဖို့အတွက် လူတိုင်းမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။”
I agree with yr ideas of 1 and 2.We must keep our Myanmars’ tradition and Culture.Now, Myanmar Cultures are affected by others .Young people imitate western style that comes from all medias.They have no sense to keep our own Myanmar Tradition and Culture,especilally Myanmar teenagers .
How sorrowful it is! I think ,we, all adults must have the responsibility to teach them to keep our Culture as much as we can.If not, our cultural heritage will be lost soon by our new generation.
I hope yr wish will be fullfil.,cos’ me too hoping the same.
Thanks for sharing .So great yr site”Shwemyanmar” is! I visited there.
မြန်မာမှု၊ မြန်မာ့ဟန်၊ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို မြန်မာတိုင်းလေးစားရပါမယ်..
အဲ..ဒါပေမယ့် တစ်ချို့သော တလွဲလုပ်သူများက မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို အရုပ်ဆိုးစေလျက်ရှိပါတယ်..
ဒီလို ဆိုဒ်လေးရှိတာ သိပ်ကောင်းပါတယ်..
၀ံသာနု စိတ်ဓါတ်တွေ တိုးပွါးစေဖို့ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။မနောရဲ့စိတ်ကူးကို အထူးလေးစားဂုဏ်ယူမိပါတယ်။လာလည်ပါ့မယ်….
ရွေမြန်မာကို လာလည်ခွင့်ရတဲ့ အများကြီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မြူနှင်းလေးတွေ ဖွေးဖွေးဖြူသော နှင်းမင်းသမီးလေးတစ်ယောက် …. နာမည်က မှတ်ရတာ တော်တော်လွယ်တယ်နော် မမ … အရမ်းလှပါတယ် …
ဆိုက်က အရမ်းကြီးနေလို့ မရတာလား… ဟန်းသွားရင် စိတ်ပြန်ပိတ်ပြီး ပြန်ဖွင့်ကြည့်လို့ရမလား။
မီးဆီမှာလဲ ကျော်ခွပြီးမှပဲ ၀င်လို့ရတယ် … ဒီအတိုင်း ၀င်လို့မရဘူး ….
ဟုတ်လား။ ဒီတိုင်းရပါတယ်။ တစ်ခါတလေ ထိုင်တဲ့စက်နဲ့လည်းဆိုင်မယ်ထင်တယ် မီးလေးရေ သိလား။ အားလုံး လာလည်အားပေးကြတာကျေးဇူးပါနော်…..
အစ်မရေ member ၀င်စရာနေရာရှာမတွေ.ဘူးဗျ
comment လဲ ရေးမရဘူး